Puntland oo Soobandhigtay Sarkaal ka baxay Xarakada Alshabaab+SAWIRO – SBC
Puntland oo Soobandhigtay Sarkaal ka baxay Xarakada Alshabaab+SAWIRO
Taliska booliska Puntland ayaa maanta Garoowe ku soo bandhigay nin horay uga tirsanaan jiray Alshabaab almujaahidiin, kaasi oo lagu magacaabo C/risaaq Axmed Xirsi .
Taliye ku xigeenka ciidan booliska Puntland C\_laahi Saalax Maxamed ayaa warfidiyeenka uga warbixiyey sida ninkaasi Xarakada Alshabaab uga soo baxay isagoo sheegay in madaxawayaha Puntland uu cafiyey kadib markii qabiilka uu ka dhashay ay ku guulaysteen in uu ka soo baxo Xarakada Alshabaab oo ay keenan Puntland ayna wanaagsantahay dhalinyarada sida khaldan loo adeegsado in looga yeero kooxaha nabad diidka ah sida Taliyuhu hadalka u yiri.
Dhankale C/risaaq Axmed Xirsi oo ahaa ninka sheegay in uu ka baxay Xarakada Alshabaab ayaa sheegay in uu uga baxay kooxda kadib markii waa sida hadalka uu yiriye uu fahmay sida tacdiga ah ee ay ula dhaqmaan bulshada ay marin habaabiyaan ayna dhib ugu filintahay intii uu la joogay.
Mar saxafiyiintu su’aalo ka waydiin howlaha uu Al-lshaab u qaban jiray iyo sababaha uu ugu biiray ayuu sheegay in uu uqaabilsanaa dhanka dacwada isagoo sheegay in uu ka howlgali jiray gobolada Jubooyinka iyo Banaadir .
Ugu dambayntii C/laahi Maxamed Aw-ciise oo ah nabadoonka beesha uu ka soo jeedo C/risaaq Axmed Xirsi ayaa dhankiisa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in uu ka soo baxo sida hadalka uu yiri kooxaha nabad diidka ah ee dhibaatada ku haya umada Soomaliyeed ayna wakht ibadan ku qaadatay sidii uu dib ugu soo celinlaha .
Ma ahan markii ugu horaysay ee saxaafada loo soo bandhigo nin sheegay in uu ka baxay Xarakada Alshabaab iyada oo horaantii bishan isla magaalada Garoowe lagu soo bandhigay wiil dhalinyaro ah oo sheegay in uu ka baxay Xarakada Shabaab almujaahidiin.
Mudooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo badan dhalinyarada ka baxaya kooxda shabaab oo ay sheegen in aysan lahayn wax hadaf ah iyo meel ay usocdaan iyada oo ay ku soo beegmayso xili kooxda mucaaradka ah ee shabaab uu soo wajahay hoos udhac xoogan oo dhanka awooda ah .